Ny IMEX no mitarika ny fivoriambe eropeana sy ny dia ataon'ny fivoriambe
Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Ny IMEX no mitarika ny fivoriambe eropeana sy ny dia ataon'ny fivoriambe
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Mialoha lalana amin'ny hoavin'ny fivoriana sy ny indostrian'ny fivoriambe any Eropa, MMGY Hills Balfour sy MMGY Travel Intelligence Europe dia miara-miasa amin'ny mpitarika indostrialy kilasy mavesatra sy MICE, IMEX, hamolavola sy hanaovana fanadihadiana 2021/22 mitondra ny lohateny hoe "A Portrait of European Meetings and Travel Travel: Fomba fijerin'ny mpitsangatsangana sy ny matihanina amin'ny drafitra. ”
Ity fanadihadiana ity dia natao handinihana tsy ny fahatsapana ny fihaonan'ny mpanatrika ihany fa ny zava-kendrena sy ny tian'ny mpanatrika.
Hanampy amin'ny fitarihana ny fanapaha-kevitra momba ny fampiasam-bola, teti-bola amin'ny marketing, ny fitomboana ankapobeny ary ny tetikady fampandrosoana.
Ny fanadihadiana dia hanome fahatakarana mazava, feno ary ara-potoana momba ny hoe inona ny fivoriana sy fivoriambe eropeana ankehitriny sy amin'ny ho avy.
Voalohany amin'ny karazany any Eropa, ity fanadihadiana ity dia natao hanadihadiana mihoatra ny efa misy, tsy ny fahatsapana ny fihaonan'ny mpanatrika ihany fa ny fikasana sy ny tian'ny mpanatrika ihany koa. Ny tanjona eropeana sy manerantany ary koa ireo mpandray anjara amin'ny indostrian'ny fizahantany dia manana fotoana hitarihana ny fanarenana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo, mifototra amin'ny fotoana sy ny fomba fiverenan'ny indostrian'ny fivoriana avy amin'ny COVID-19. Ity fanadihadiana ity dia hanampy amin'ny fitarihana ny fanapaha-kevitr'izy ireo momba ny fampiasam-bola, teti-bola amin'ny varotra, ny paikady fitomboana sy ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny fanomezana fahatakarana mazava, feno sy ara-potoana ny fahitan'ny fivoriana sy fivoriambe eropeana ankehitriny any aoriana.
Sarin'ny fihaonambe eropeana sy ny dia amin'ny fivoriambe
Araka ny nasongadin'ny fanadihadian'ny MMGY Travel Intelligence tany Etazonia farany teo, dia mety hisy fahasamihafana lalina eo amin'ny fomba fijery sy ny fitondran-tena eo amin'ireo mpandrafitra sy mpanatrika. Eoropeana no misy ny foiben'ny sasany amin'ireo mpikarakara hetsika manerantany manan-danja indrindra ary, miaraka amin'ny fahitana sarobidy azo tamin'ity fanadihadiana ity, ny tanjona dia mety hipoitra am-pahatokian-tena amin'ny fahalalany sy ny fahatakarany ny tontolon'ny MICE ivelany any Eropa mandritra ny volana sy taona ho avy.
Naneho hevitra momba ny fanadihadiana amerikana i Butch Spyridon, filoha sady CEO an'ny Nashville Convention & Visitors Corporation (NCVC), dia nilaza hoe: Fomba fisainan'ireo mpanomana drafitra amerikana sy mpanatrika. Noho ny fanampian'ity angona marina ity, Nashville dia afaka namorona paikady M&C matanjaka, mifandraika sy mieritreritra kokoa, manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy hampiroborobo ny tolotra ataontsika any an-tsena. ”
Carina Bauer, IMEX Ny CEO CEO, dia nilaza hoe: "Rehefa mivory momba ny 'fananganana mandroso tsara kokoa' ireo fihaonambe eoropeanina, dia hanome fomba fijery vaovao sy fampahalalana momba ny asa mifototra amin'ny angon-drakitra solontenany ireo fikarohana ireo. Isika rehetra dia samy manana ny fahaizantsika avy amin'ny toerana niaviantsika sy izay niainantsika nandritra izay roa taona izay. Ity fikarohana ity dia mikasa ny hampiseho sary mazava kokoa ny amin'izay alehantsika. ”
Natao ho an'ny mpandrafitra eran'i Eropa sy ho an'ny mpanatrika any UK, Alemana, France ary The Netherlands, ny fanadihadiana dia hatao amin'ny onja roa: ny voalohany amin'ny Q4 2021 ary ny faharoa amin'ny Q1 2022.
Hiresaka lohahevitra mifandray sy ara-potoana toy ny:
● Inona no tsapan'ny mpanatrika ny fivoriana virtoaly sy hybrid ary ahoana no heverin'izy ireo fa mety hisy fiatraikany amin'ny fitondran-tenany amin'ny 2022 sy ny sisa?
● Toerana fihaonambe inona avy no mitaona ny mpanatrika handroso ary ahoana no nanovana ireo preferences ireo noho ny COVID-19?
● Misy fizarana indostrialy sasany azo inoana kokoa noho ny ampahan'ny indostria hafa mba hanatrika tsy tapaka ny fomba nataony talohan'ny COVID-19?
● Votoatiny, toerana sy / na fandrisihana inona no ho voatery hanery ny mpanatrika handray fanapahan-kevitra handeha hamonjy fivoriana?
● Inona ireo sakana, ankoatry ny olana ara-pahasalamana sy fiarovana azo tsapain-tanana, mila esorina na hahena?
● Fizarana fivoriana inona (oh: SMERF, fikambanana, orinasa sns.) Andrasan'ny mpikasa ny ho sitrana aloha ary inona ny fandaharam-potoana andrasana?
● Ahoana no ahafahan'ny orinasan-tserasera fitantanana sy fitantanana hamaly tsara kokoa ny filan'ny fivoriana ara-barotra ankehitriny sy amin'ny ho avy?
● Amin'ny fomba ahoana no mety hisy fiantraikany amin'ny fandrindrana ny vondrona ny logiciel amin'ny fivoriana na ny logistika, ary inona ny fepetra fiarovana vaovao izay tena zava-dehibe ho an'ny mpandamina sy ny mpanatrika?
The Best Producer of Bathroom Ware Novambra 30, 2021